6 အိပ်ခန်းများ အိမ် ရောင်းရန် အတွင်း Mayangone, Yangon
၈မိုင်ရှိရောင်းရန် လုံးချင်း (ID-171)
Sale: Lks 4,900
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 171
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၈မိုင်တွင်တည်ရှိသော ရောင်းရန် ၂၀၀၀ စတုရန်းပေအကျယ် သုံးထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၃၀၀၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသည့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် လေးခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ရေပူရေအေးပေးစက်၊ ဖုန်းလိုင်းနှင့် Sky-net လိုင်းများ ထည့်သွင်းပါရှိပြီးဖြစ်သည်။
လုံးချင်းအိမ်၏အရောင်းဈေးနှုန်းမှာ - သိန်း ၄၉၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
278.7 Sq.M. Land area
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 1,134 other listings.
Other searches in Mayangone
ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Mayangone
ရောငျးရနျကှနျဒို အတွင်း Mayangone
ရောင်းရန်အိမ် အတွင်း Mayangone
ငှားရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Mayangone
ငှားကှနျဒို အတွင်း Mayangone
ငှားရန်အိမ် အတွင်း Mayangone
ငှားစီးပှားဖွဈအိမျခွံမွေ အတွင်း Mayangone